Somaliska-2010 - Högskoleverket
Warbixin ku saabsan Hey´adda kulliyadaha iyo kulliyaddaha dalka Iswiidan
Bogga internetka ee Högskoleverket, hsv.se Kulliyaddaha dalka Iswiidan Hawlahan ayaa uu qabtaa Högskoleverket
Waxa uu taageeraa horumarinta tayda tacliinta sare
Qiimeynta shahaaddaha waxbarashada ee dalalka shisheeye Ogeysiin iyo dhiirgelin waxbarashooyin
Waxaanu ilaalinaa in waxbarashadu ay u hagto qofka shaqo
Waxaanu dhuwrna xuquuqda ardayda
Daraasadda iyo baarista qaab dhismeedka tacliinta sare
Isku dubaridka tirakoobka ku saabsan laamaha tacliinta sare
Waxaanu la soconaa tacliinta sare ee dalalka kale
Warbixinno ka ku qoran luqado kale ee ku saabsan tacliinta sare
Hay´addaha kale tacliinta sare ka hawlgala
Akhriska qoraalka pdf ku qoran iyo dalbashada qoraallada
Bogga internetka ee Högskoleverket, hsv.se Hsv.se waa bogga internet´ka ee Högskoleverket. Waxaa ku jira warbixinno qotodheer oo ku saabsan kulliyaddaha dalka Iswiidan. Halkan waxaa ka helaysaa warbixinno ku saabsan sida ay u shaqeeyaan Högskoleverket, kulliyaddaha, jaamacaddaha, sharciyada, xeerarka iyo nidaamka loo dejiyay tacliinta sare iyo qiimeynta shahaaddooyinka waxbarashooyinka lagala yimaado dalka shisheeye. Boggan waxaa kale oo lagu soo bandhigaa tirakoobyo cusub ah oo ku saabsan jaamacaddaha. Qoraallo Högskoleverket, oo tusaale ahaan ah go´aamo iyo warbixinno ayaa boggan iyana ku yaal. Hsv.se waxay ku qoran tahay af-iswiidish. Halkan bay ku jiraan warbixinno intaas ka faahfaasan oo ku xiriirsan bogagga kulliyaddaha dalka Iswiidan [af-soomaali].Kulliyaddaha dalka Iswiidan Dalka Iswiidan dawladda ayaa ka masuul ah hawlaha waxbarasho ee heer jaamacaddeed ah. Baarlamaanka iyo xukuumadda ayaa go´aamiya xeerarka lagu shaqaynayo iyo sida dhaqaalaha loo adeegsanayo. Laakiin jaamacaddaha iyo kulliyadduhu, waxay yihiin iyagu hay´addo dawli ah. Taasi oo micnaheedu yahay inay iyaga laftoodu ay wax badan ka go´aaminayaa shaqadooda.Ma jiro wax faraq ah oo sidaas u sii weyn oo u dhexeeya jaamacaddaha iyo kulliyaddaha. Jaamacaddaha oo dhan iyo kulliyaddaha badankooda waxaa leh dawladda. Hase yeeshe hal faraq baa jira, kaasi oo ah in jaamacadda aad mar walba hore u sii wadan kartid cilmi baaris waxbarasho la xiriirta heerka aasaasiga iyo kan sareba. Taas ma samayn karaan kulliyadduhu.Jaamacaddaha iyo kulliyaddaha ku yaal dalka Iswiidan waxay dhan yihiin 37. Kuwaas oo ka wada meelaha ay ku yaalliin waxbarasho iyo cilmi baaritaan. Waxaa kale oo jira dhowr si gaar ah loo leeyahay oo iyana ka hawlgala waxbarashooyin, xaqna u leh inay tacliin sare ka bixiyaan kulliyaddaha. Bogga Högskoleverket waxaa ku yaal liiska cinwaanada dhammaan jaamacaddaha iyo kulliyaddaha. Hawlahan ayaa uu qabtaa HögskoleverketWaxa uu taageeraa horumarinta tayda tacliinta sareHögskoleverket (Heyada Tacliinta Sare) waxa ay dabagal ku sameeysaa program yada ama tacliinta lagu dhigu jamacadaha, si ay wax uga ogaato una hormariso anfaca wax barashada. Ujeedaduna waxa ay tahay in la dhiiri galiyo, lana siiyo qalab kasta oo u fuddudeynaya arimahooda si ay jaamacaduhu kor ugu qaadaan tacliinta. Mudo gaareysa afar sano, ayaa la qiimeeyaa waxbarashada sare ee guud ee jaamacadaha iyo meelaha mahnada/xirfada lagu barto. Intaas waxaa soo raaca masuuliyada ka saaran qiimeeynta imtixaanka. Jamacadaha/kuliyadaha Waxaa la siiyaa warbixin ku saabsan baaritaankii lasameeyay,waana ladaabac baaritaanka si masawir buuxa looga helo.Qiimeynta shahaaddaha waxbarashada ee dalalka shisheeye Qofka waxbarasho ku soo dhammaystay dal kale oo shisheeye Högskoleverket waxay u samayn karaysaa qiimeyn. Taasi oo caddeynaysa heerka waxbarashadaas dalka shisheeye lagala yimid ay u dhigmayso, marka loo qiyaaso tacliinta dalka Iswiidan. Waxaan kale oo aanu warbixin ka siinaa jaamacaddaha, kulliyaddaha iyo shaqo bixiyayaashaba qaabka loo maro si waxbarasho dal shisheeye looga aqoonsado dalka Iswiidan. Dalka Iswiidan laamaha tacliinta sare qaarkood waxay u hagaan qofka baranaya xirfado leh nidaam xafidan. Waxbarashada dalalka shisheeye lagala yimaado ee la xiriira xirfaddaas xafidan, waxaa qiimeynaya hay´adda u xilsaaran xirfaddaas. Halkan bay ku yaaliin liiska hay´addaha dhowra xirfaddaha nidaam xafidsan.
Reglerat yrke (Xirfadaha)
Apotekare (daawo-yaqaanne), arbetsterapeut (baxnaaniye), audionom (farsamada maqalka), barnmorska (ummuliso), biomedicinsk analytiker (shay-baare), dietist (naafaqo-yaqaanne), kiropraktor (chiropractor), logoped (farsamada hadalka), läkare (macallin), naprapat (naprapath), optiker (farsamada indhaha), ortopedingenjör (lafa-yaqaanne), psykolog (takhtarka caafimaadka maanka) , psykoterapeut (takhtarka dimirka), receptarie (daawo-yaqaanne hoose), röntgensjuksköterska (kalkaalisada raajada), sjukgymnast (jimicsi-yaqaanne), sjukhusfysiker (farsame-yaqaaneha isbitaalada), sjuksköterska (kalkaalisada caafimaadka), tandhygienist (kalkaalisada caafimaadka ilkaha), tandläkare (Takhtarka ilkaha)
Auktoriserad tolk (turjubaan aqoonsiga karti-xirfadeedka leh), auktoriserad översättare (turjumeha aqoonsiga karti-xirfadeedka leh)
Brandskyddskontrollant (kormeeraha halista dabka)
Fastighetsmäklare (Dulaalka guryaha)
Lärare inom det offentliga skolväsendet (macallin dugsiyada guud)
Trafiklärare (macallinka gaadiid-wadida)
Veterinär (takhtarka xaayawaanada)
Akhariso warbixin intaas ka faahfaahsan oo ku saabsan qiimeynta warbarashada dalalka shisheeye iyo shuruuddaha imtixaanka macallimiinta ee ku yaal qoraallada Högskoleverket. Ogeysiin iyo dhiirgelin waxbarashooyinHögskoleverket waxay ogeysiiska ku saabsan tacliinta sare ku soo baahiyaa bogga internet´ka www.studera.nu iyo qoraallo kala duwan oo lagu soo daabaco. Intaas waxaa dheer buug saldhig ku leh internet´ka oo lagu wergeliyo heerka waxbarashada (phD). Waxaa kale oo aanu ka hawlgalnaa waci gelinta in aanu kor u qaadno tirada ardayda tacliinta sare soo geliysa ee ka soo jeeda qoysaska aan hore u lahayn dhaqan tacliin jaamacaddeed ah iyo dadka aan ahayn iswiidishka ee ajinebiga ah. Waxaanu ilaalinaa in waxbarashadu ay u hagto qofka shaqoHögskoleverket wuxuu ilaaliyaa oo warbixinno joogto ah ka sameeyaan suuqa shaqada horumarkiisa iyo kolba jahooyinka uu u janjeersanayo. Waxaanu baaris ku samaynaa sidii aanu wax u bari lahayn tiro ku filan qeybaha kala duwan ee suuqa shaqo. Waxaanu kale oo ka daba tagnaa oo baaris ku samaynaa dadkii qeyb walba wax ka bartay, sidii ay suuqa shaqada uga guuleysteen.Waxaanu dhuwrna xuquuqda ardaydaHögskoleverket waxay dabagal iyo kormeer ugu kuurgashaa jaamacaddaha iyo kulliyadduhu inay raacayaan sharciga iyo xeerarka. Wax aanu samaynaa waxyaabo ay ka mid yihiin in aanu hubinno in ardayda loola dhaqmo si caddaalad ah. Kormeerka aanu samayno, waxaa noo igmada dawladda, ama anaga ayay naga timaaddaa fikraddu, ama marka ay na soo gaadho ashkato ka timid qof shaqsi ah. Daraasadda iyo baarista qaab dhismeedka tacliinta sareHögskoleverket waxay ku sameeyaa daraasad qoto dheer hawlgalka jaamacaddaha iyo kulliyaddaha , waxayna ka soo saaraan daraasad gun dheer iyo waxbarashooyin mowduuc raaca leh. Ujeedadu waxaa weeye, ugu horeyn in la siiyo baarlamaanka iyo xukuumadda macluumad saldhig u noqda go´aamada arrimaha muhiimka ee ku saabsan jaamacaddaha iyo kulliyaddaha. Waxaanu kale oo doonaynaa in daraasaddahayga, ku saabsan tusaale ahaan, tacliinta, simaanta dumar iyo ragga, sinnaanta naafada lagula dhaqmaayo, ay wax ka taraan horumarinta tacliinta sare.Isku dubaridka tirakoobka ku saabsan laamaha tacliinta sareGolaha sare ee tacliintu waxay masuul ka tahay tirakoobka rasmiga ee jaamacaddaha iyo kulliyaddaha. Waxaanu go´aaminaa macluumaadka la ururrinaayo iyo sida loo adeegsanayo. Waxaa ka mid ah macluumaadka aanu ururrino tirada ardayda ee ku jira laamaha kala duwan ee waxbarashooyinka, da´da, immisa rag ah ama dumar oo macallimiin ah ayaa ka dhiga tacliinta sare iyo wakhti intee leg baa la geliyaa cilmi baarista mowduuciyada kala duwan. Waxaanu ku samaynaa tirakoobyadaas daraasad, kadibna waxaanu ku soo daabacnaa boggayaga iyo warbixin sannaddeedka xagaag kasta.Waxaanu la soconaa tacliinta sare ee dalalka kaleHögskoleverket wuxuu la socoda hormarka ka socda dhinaca jaamacaddaha iyo kulliyadda, gaar ahaan Yurub iyo USA iyo adduunyadda inteeda kale. Ujeedadu waxay tahay in loo sahlo ardayda isu socodka ay ugu kala gudbayaan wadamada kala duwan iyo hababka tacliinta sare oo iyana kala duwduwan. Warbixinno ka cusub ee arrimahaas ku saabsan waxaanu ku soo daabacnaa wargeys khaas ah. Warbixinno ka ku qoran luqado kale ee ku saabsan tacliinta sareBogga Högskoleverket ee hsv.se waxaa ku jira soo koobid ku qoran luqadda ingriisiga.Qiimaynta wax barashada caalamiga ah iyo shahaadooyinka cadeeynay in qofi shirkad leeyahay iyo waliba xaafiiska beecmushtariga ee Stockholm, waxaad ka aqrisan kartaa buuga yar oo ay soo saarto Högskoleverket(heyada qaranka u qaabilsan jamacadaha). Waxaad ka heli kartaa warbixintaas oo ku daabacan luuqado faradan oo ay kamid yihiin Albanian, carabi,Bosnian, Serbian, Faransiis, Iswiidhish la jilciyay,Persian,Russian,Somali,Spanish,Thailändiska iyo Turkish iyo ingiriis, ayagoo ah pdf-format. Boga internetkana waxaa laga heli karaa asagoo ah Finnish, Yiddish, Romani, Sami iyo Meänkieli(Tornedal Finnish). Af-Soomaali »Iswiidhish Fudud (Lätt svenska) » Hay´addaha kale tacliinta sare ka hawlgalaCSN (Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda) Golaha dhexee ee ardayda, wuxuu maamula kaalmada ardayda iyo taageeroyinka kale ee ardayda laga siiyo. Xafiiska borogaama caalamiga waxaa uu taageeraa iskuullada, jaamacaddaha, shariikaddaha, ururrada iyo shakhsiyaad doonaya inay ka qeyb qaataan wada shaqeyn caalami ah. Machadka dalka Iswiidan waxaa waajibaadkiisu yahay in uu ku faafiyo daalka kale aqoonta Dalka Iswiidan iyo in uu ka jawaab bixiyo wax is dhaafsiga ka dhexeeya dalka Iswiidan iyo dalalka kale ee la xiriira arrimaha dhaqanka, tacliinta, cilmi baarista iyo guud ahaanba arrimaha bulshada. Verket för högskoleservice, VHS, waxay fulisa oo u xilsaaran tahay qaadashada ardayda gelaysa inta badan laamaha tacliinta sare, iyada oo ay xilkaas u igmadeen jaamacaddaha iyo kulliyadduhu. Akhriska qoraalka pdf ku qoran iyo dalbashada qoraalladaHaddaba, si ay kuugu suurtagasho inaad akhrisato qoraal pdf ku qoran, waxaad u baahan tahay barnaamijka Acrobat Reader. Waxaadna barnaamijkaas oo lacag-la'aan ah ka keensan kartaa bogga shirkadda Adobe.